Ikhaya / Blog / Dala Uhlelo Lokuhlobisa Lokugeza Kwamakamelo Ngamapayipi Okugeza
2021 / 09 / 27 UkwahlukanisaBlog 2234 0
Umpompi wasendlini yokugezela ungenye yezindlela ezingcono kakhulu zokuqedela ukuvela kwengubo yokugezela noma ubhavu neshawa. Ubuchwepheshe bompompi bendawo yokugezela buthuthuke kakhulu, okungakuvumela ukuthi ulawule kangcono amanzi futhi kukunikeze ngokuthembeka okuphezulu. Abanye ompompi banomsebenzi wokulawula ukushisa ongawushintsha ukuze usize ukuvimbela izigaxa ezibangelwa amanzi ashisayo kakhulu - lokhu kubizwa ngokuthi isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu anti scald function. Enye yezinto ebaluleke kakhulu okufanele ibhekwe yikhwalithi yezinto ezisetshenziswa abakhiqizi ekwakheni ompompi. Okukhethwa kukho okuhle ukusebenzisa ithusi eliqinile noma insimbi enhle yethusi, nayo esiza ukuvimbela ukubola. Ungahlala uthola ipayipi lokugezela elishibhile, kepha ngokuhamba kwesikhathi, ukonga ngeke kukhuphuke, ngoba uzoba nompompi ompompi wokugezela wokuphila, futhi kungahle kube nezinkinga zangaphakathi ozohlangabezana nazo ekugcineni. Oompompi abashibhile ngokuvamile basebenzisa isiqu sokuphakamisa ukuvula nokuvala i-valve. Ngalomklamo, i-washer engezansi kwesiqu se-valve izogqoka ngokushesha futhi ekugcineni yenze ukugezela kompompi wokugezela kugeze. Kumamodeli amasha anompompi, okungcono ukukhetha i-valve engenagasket. Lokhu kuzosebenzisa amadiski e-ceramic namakhadibhodi e-inki futhi kubonakala kuyintandokazi kubantu ompompi bokugezela kanye nebhavu neshawa. Ngoba mancane amathuba okuthi avuze njengompompi be-valve wokuminyanisa, ekugcineni uzothola umpompi omanzi wokugeza wokuhlala ngaphandle kokuconsa.
Isitayela nomqondo wepayipi lokugezela
Yize ukwakheka kwangaphakathi kompompi wokugezela kubalulekile, ukubukeka kukonke kompompi kusobala kubo bonke. Kuyingxenye ebalulekile yombhobho wokugeza wasendlini yokugezela. Oompompi bezindlu zangasese bafika ngezitayela ezahlukahlukene, kusuka kwimfashini yesimanje kuya kumklamo wakudala wasendulo. Isibambo sepayipi sivela ebangeni noma ezinkalweni zesihlakala kuya kompompi abancane abavundlile abasetshenziswa ekhishini kuphela. Ama-Knobs kanye nezibambo ezinqamulelayo kungenye inguquko okufanele uyicabangele. Ukwelashwa kompompi wokugeza wasendlini yokugezela kuyingxenye ekhanga kakhulu yeyunithi yompompi. Abakhiqizi banezinketho ezahlukahlukene, futhi i-chromium ingenye yezinketho ezithandwa kakhulu. Uma ufuna ipompi yamahhala yesondlo, ipayipi le-chrome elixutshiwe lizoba yisinqumo esihle ngoba akulula ukukhiqiza amabala amanzi. Amapayipi ompompi endlu yokugezela athandwa njengokufulelwa nge-chrome, futhi imithetho yokudaya iyasebenza kulondolozo lwompompi. Ikhithi yompompi ephezulu inezingubo ezithuthukisiwe zokukunikeza ukumelana okungangeni manzi, okokulwa neziqwengana nokuklwebheka. Umkhiqizi unikeza ingxubevange yamathini, i-nickel nethusi njengokuqedelwa okuthandwa kakhulu, kanye nokupholishwa, okuxubha kanye nokuqedwa kwamatte. Isiphetho esimnyama seMatte sihluke kakhulu futhi sihle, ngakho-ke ungesabi ukuzama ukubukeka okusha. Akunandaba ukuthi hlobo luni lwesitayela sokugezela ofuna ukulufeza, kuzoba nompompi wosinki wokugezela ukwengeza umhlobiso wakho wokugezela.
Ubuciko bompompi bokugeza
Uma uhlela isitayela nokuklanywa kwendlu yokugezela kanye nompompi wokugeza wasendlini yokugezela ofanele uhlelo lwakho, zama njalo ukucabanga ngehadi lokugezela kanye neshawari yompompi wosinki njengengqikimba. Ungahlobisa ngezinye izinto, njengezibambo zokubamba, izibambo, amarowu wamathawula namaraka wamaphepha asendlini yangasese, ngisho nokuchitha imicengezi yamaphepha. Uma uqalaza, uzothola amakhithi okugezela aphelele, noma ungakhetha ukuxuba nokufanisa - hlala nje kusihloko sehadiwethi yompompi, ukuze umhlobiso ukwazi ukuntanta kahle.
Edlule :: Ukuthola I-Plumber Namathiphu We-Plumbing Ukunciphisa Ukusetshenziswa Kwamanzi Olandelayo: Oompompi Bendawo Yokugeza BamaNickel Abashaywayo - Inketho Ehle Kuwe
2021 / 09 / 28 2292
2021 / 09 / 25 4232
2021 / 09 / 24 2431
2021 / 09 / 24 2329
2021 / 09 / 24 1449